सलमानले ऐश्वर्यामाथि हातपात गरेको प्रसंग पूनः चर्चामा | Suvadin !
सलमानले ऐश्वर्यामाथि हातपात गरेको प्रसंग पूनः चर्चामा
ऐश्वर्याले सलमानले आफूमाथि हातपात गरेको कुरा सार्वजनिकरुपमै स्वीकारेकी छिन्। यो उनीहरु अफेयरमा रहँदाको घटना हो। ऐश्वर्याले एक अन्तरवार्तामा भनेकी छन्, ‘उनले मलाई अन्य सहकर्मी कलाकारहरुसँग नजिकिएको भनेर शारीरिक र मानसिक आक्रमण गर्थे। भाग्यवश, मेरो शरीरमा कुनै चोटपटक लागेन। त्यसैले म केही नभएजस्तो गरी बसेँ।’
Oct 10, 2018 14:46
काठमाडाैं, २४ असोज – भारतमा ‘मि टु’ अभियानले भारतमा उग्ररुप लिइरहँदा बलिउड अभिनेता सलमान खानले तत्कालिन प्रेमिका ऐश्वर्या रायलाई हातपात गरेको प्रसंगले फेरि चर्चा पाएको छ। कतिपयले सलमान र ऐश्वर्याका पुराना अन्तरवार्ताहरु पनि शेयर गरिरहेका छन्।
सलमानको टर्चर सहन नसकेर आफूले प्रेम सम्बन्ध तोडेको ऐश्वर्याले बताएकी छन्। तर, त्यसपछि पनि दुख दिन नछोडेको उनी बताउँछिन्। ऐश्वर्याले भनेकी छन्, ‘मैले कल रिसिभ नगर्दा उनी आफैँलाई चिथोर्थे।’ तर, सलमान यो कुरा स्वीकार्न तयार छैनन्।
के तपाईंले कुनै महिलालाई हातपात गर्नुभएको छ ? भनी पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा सलमान भन्छन्, ‘हो, एउटी महिला (ऐश्वर्यालाई ईंगित गर्दैं) ले यस्तो आरोप लगाएकी छिन्। यदि साँच्चै मैले हात हालेको भए सायद उनी जिवित रहने थिइनन्। मेरो मुड्की कति बलियो त दुनियालाई थाहा छ।’
ऐश्वर्या सलमानलाई छोडेर विवेक ओबरायसँग सम्बन्ध गाँस्न पुगेकी थिइन्। तर, उनले बिहे भने अभिषेक बच्चनसँग गरिन्। यता सलमान चाहिँ अहिलेसम्म अविवाहित नै छन्।